ISHUMI ELINESIHLANU LEZONA ZIXEKO ZILUNGILEYO KWIHLABATHI-ULONWABO OLULANDELAYO - UKUTYA NEZISELO
Phezulu kwe-15 yeDolophu eziChukumisayo kwihlabathi
Ukuba uyindoda eyonwabelayo ukuhamba kwaye ibona bonke ubuhle behlabathi obufunekayo, yongeza la mabala kuluhlu lwakho. Ukunikezela ngeentlobo ngeentlobo zobomi bobusuku, inkcubeko kunye nembali, ezi zixeko ziphakathi kwezona zibalaseleyo, zintle kwaye zahlukile. Nokuba uphi na umdla wakho, uqinisekile ukuba uza kufumana iindawo ezinomdla onokucinga ngazo kuhambo lwakho olulandelayo.
Idume njengeyona dolophu inabemi abaninzi kwilizwe nakwilizwekazi laseOstreliya, esi sixeko sixakekileyo saqala ukusekwa njengethanga laseBritani. Ngoku kuthathelwa ingqalelo inkcubeko yase-Australia kunye nobusuku bobusuku, zininzi izizathu zokutyelela iSydney kaninzi. Abase-Australia bayayithanda imidlalo ngokubanzi, kwaye iSydney liziko lombhoxo, ibhola ekhatywayo kunye neendidi ezimbini zebhola ekhatywayo.
Iqakamba, umdyarho wokurhuqa kunye nebhasikithi nazo zithandwa kakhulu. Ngenxa yokuthandwa kwezemidlalo kunye nemozulu entle, amanenekazi aseAustralia athathwa njengeyona intle kwihlabathi liphela, kwaye kukho ubomi obudlamkileyo bobusuku bokudibana nabo esixekweni. Ukusilela kwesithintelo kulwimi kuyibhonasi enkulu xa uthandana eSydney, ngakumbi ukuba uyindoda ethembele kunxibelelwano.
2.EPrague, kwiRiphabliki yaseCzech
Esona sixeko sikhulu kunye nekomkhulu leRiphabhlikhi yaseCzech, iPrague yindawo yabo banandipha imozulu ethambileyo, uyilo olumangalisayo, kunye nembali, ikushiye unemyuziyam kunye neegalari zobugcisa. Isixeko besisebenza ngaphezulu kwewaka leminyaka, sisenza ukuba izitalato zibe ngumbono omuhle kuba khange ifumane monakalo omkhulu kwi-WWII.
Ukuba uyindoda yenkolo, iinkonzo ezigcinwe eSaint Vitus 'Cathedral zithathwa njengezona zintle kakhulu ezibonelelwa esixekweni kwaye icawe ngokwayo iyamangalisa ukuyibona. Inqaba yasePrague, ekumnyango olandelayo wecawe enkulu, ihlala kwiCrown Jewel yaseCzech Republic kwaye yindawo ethandwayo kwindawo yakudala yesixeko. kwabo banandipha imbali kunye noyilo, iPrague yindawo ekumele ukuba uyibone.
IBern yindawo apho ubugcisa bunobukho obukhulu. Ithiyetha, iminyhadala yeefilimu kunye neefirs ziqhelekile unyaka wonke, ke kuya kubakho umsitho olungiselelwe iimfuno zakho ngexesha lokuhlala kwakho. Ibhola ekhatywayo ithandwa kakhulu kwaye kuya kufuneka uzame ukuthatha umdlalo ukuba unako, njengoko umoya ungowesibini kuye komnye. Ngubani owaziyo, ungadibana nenenekazi elihle kumdlalo.
umnqamlezo kunye ne-tattoo yeflegi yaseMelika
Amagumbi ee-Adventure kufuneka abonwe eBern. Ngumdlalo wabantu aba-3 ukuya kweli-12 apho kuya kufuneka ubaleke uthotho lwamagumbi ngokukhangela iingcango ezifihliweyo okanye ukuguqula iipuzzle ezinzima. Ngelixa uninzi lwee-movie ezoyikisayo zisebenzise esi siqalo, Amagumbi e-Adventure aye ayiguqula imeko yaba ngumdlalo omnandi, wobukrelekrele ngaphandle kwengozi. Olu luvo olukhulu lomhla wokuqala, njengoko awudingi ukwazi isiJamani ukuba uthathe inxaxheba kwaye ube nexesha elimnandi.
Ibizwa ngokuba 'sisiXeko saManzi' ngabanye, esi sixeko sase-Italiya kudala sanconywa njengendawo ethandwayo yothando. Endaweni yezitrato, iVenice inothotho lwamanzi ahamba ngephenyane elincinci elibizwa ngokuba ziigondolas. Ukuhamba ngegondola kuthathwa njengenye yezona zinto zithandwayo, njengokuhamba ngaphezulu kweebhlorho ezininzi ezidibanisa iibhloko.
Njengakwiindawo ezininzi zokuya e-Itali, ifashoni, uyilo, uyilo, iwayini kunye nomculo bonke bubugcisa obukhulu benkcubeko, busenza esi sixeko sibe yindawo entle yeholide ukuba ungumntu othanda izinto. Ukwenza iglasi bubugcisa obukhethekileyo eVenice, kwaye amagcisa apho athathelwa ingqalelo njengezona zibalaseleyo emhlabeni. Ukuba ufuna ubugcisa bokuhombisa ikhondomu yakho, nantsi indawo yokuthenga.
5.IRio de Janeiro, eBrazil
Esi sixeko sasilikomkhulu laseBrazil ngaphezulu kweenkulungwane ezimbini kwaye sithathwa njengesiXeko esiMangalisayo. Ukujongana nomfanekiso oqingqiweyo kaKristu uMhlawuleli, iRio yaziwa ngamaqela ayo kunye nomoya ofana nomnyhadala. Ukuba uthanda amava okukhawuleza kunye ne-eclectic, iRio yindawo efanelekileyo yokuya.
Iilwandle ziyamangalisa ngokufaka imitha ethile okanye ukuncokola ngamanye amanenekazi asekuhlaleni, ungalindelanga ukuba iSpanish samabanga aphakamileyo sikufikelele kude. Ulwimi lwasekuhlaleni sisiPhuthukezi. I-Rio ikwaphumelele inyhweba yokubamba iMidlalo ye-Olimpiki yasehlotyeni ka-2016, nto leyo ethetha ukuba isixeko siza kube sisakhiwa kwiminyaka embalwa ezayo. Gcina oku engqondweni ukuba ucinga ukuhamba apha, kwaye uqiniseke ukuba iindawo ofuna ukuzityelela ziya kuvuleka kwaye zifikeleleke.
Kudala isaziwa ngokwamkela ukutshaya kunye nokukhanya okubomvu kwisithili, esi sixeko sinetoni engaphezulu esinokuyinikela. Eyaziwa njengeziko lenkcubeko elinobomi obudlamkileyo kwaye obahlukeneyo bobusuku, iAmsterdam inento kuwo wonke umntu. Abantu be-LGBTQ bamkelwe ngezandla ezishushu kwaye banoluhlu lwemivalo kunye neeklabhu ezilungiselelwe le ndlela yokuphila.
Imikhosi engaphezulu kwe-140 ngonyaka ibanjelwa apha, enemixholo eyahlukeneyo ukusuka kumdaniso wesintu ukuya kwixabiso lewayini. Ukuba unenkululeko yokucwangcisa uhambo lwakho ukuze luhambelane nomnyhadala ojolise kwimidla yakho, kuya kufuneka wenze njalo. AmaDatshi anobubele kakhulu kwaye oku kuthathwa njengendawo ekhuselekileyo yokuhlala kunye nokonwabela iindawo.
Esi sixeko sizibiza ngokuba 'sisiXeko esiManyeneyo ngeNtliziyo' kwaye likhaya labemi abaninzi abafudukele kwelinye ilizwe. Oku kuthetha ukuba abahlali basetyenziselwa ukunxibelelana nabantu bamanye amazwe kwaye bonwabile ukuzama ukukunceda. Ukuba awukhange uhambe kakhulu okanye iJamani yakho iyashukuma, iMunich yindawo entle yokuba nexesha elimangalisayo ngaphandle kokuziva uwedwa. Ezemali kunye nokupapasha zimbini zamashishini aphambili, ezenza indawo yokuthenga ukuba usasebenza kwingqokelela yeencwadi zakho.
Izihloko ezininzi zinikezelwa, ngesiNgesi, ngamaxabiso ongenakufumana kwenye indawo. Iingcali zeBotanists ziyakonwabela ingqokelela enkulu yobomi bezityalo oboniswe e-Englischer Garten. Imvula nekhephu ziqhelekile, ngenxa yokusondela kwiiAlps, okwenza le ndawo ibe yindawo yabafoti. Nokuba uzenza ziphi izinto zokuzonwabisa, iMunich inokuba yindawo elungileyo yokuzisebenzisa.
Kwakuba nje kuthotho lweelali zaseCeltic ecaleni komlambo iDanube, iBudapest ngoku sesona sixeko sikhulu eHungary kwaye yindawo yesithandathu ethandwa ngabakhenkethi kuyo yonke iYurophu. IBudapest yaziwa ngokuba yindawo entle yomdaniso, umdaniso kunye nee-spas zayo. Ukuba uyakonwabela ukufumana umyalezo, ukuthambisa okanye ukuhlamba umphunga, isixeko sibonelela ngamava awodwa ngenxa yokuxhaphaka kwemithombo yamanzi ashushu yendalo esele ikonwabele ngaphezulu kweminyaka engama-500.
Kukho iindawo ezininzi onokukhetha kuzo, zonke ezinendawo egcinwe kakuhle yoyilo ukusuka kumaxesha ahlukeneyo ukusuka eRoma ukuya eTurkey ukuya kule mihla. Kulabo baxabisayo umdaniso wobuhlanga, kukho amaqela amaninzi asebenzayo enza kuwo wonke umzi ngezambatho zemveli. Ukuba udibana nomntu okhethekileyo kuhambo lwakho, ukumthatha aye kumbona umdaniso wesiko lesiqhelo kukufunda kwaye kumnandi ukuba ujonge.
ikude kangakanani tattoo engeyonyani
Emi ngaselunxwemeni lweIberia, esi sixeko sesinye sezona zidala ehlabathini. Iimbali zembali, iigeeks zokwakha, ifilimu aficionados kunye nabalandeli bezemidlalo bonke baya kufumana into ekhethekileyo eLisbon. Esi sixeko yayiyindawo awazalelwa kuyo umgubo wamaPhuthukezi kwaye isitayile siye sahamba kwihlabathi liphela lesiPhuthukezi.
Unokuzixabisa izinto ozibonayo ngelixa usiya kweminye yeminyhadala yemiboniso bhanyabhanya ebanjelwa unyaka nonyaka, okanye uthathe umdlalo webhola ekhatywayo nabantu balapha. Izithuthi zikawonke-wonke zihamba kuyo yonke indawo kwaye kulula ukuyiqonda, eboleka esi sixeko kubafana abathanda ukwenza kwaye babone okuninzi ngelixa besekhefini. Ukuba unethemba lokubona kwaye wenze okuninzi kuhambo olunye, iLisbon sisixeko sakho.
Ikhaya leNqaba ye-Eiffel, iArc de Triomphe, kunye nemyuziyam yaseLouvre, iParis ithathwa njengeyona dolophu ithandwayo kwihlabathi. Egcwele izinto ezintle kunye nokutya okumnandi, le yeyona ndawo yokugqibela kwizibini ezitshatileyo okanye abo banethemba lokudibana nomntu. Akufanele uphoswe kukubona iParis Opera House, uhambahamba ecaleni kweAvenue des Champs-Élysées okanye utya isidlo sasemini kwenye yeebistros zethambeka eliqingqiweyo elineedolophu.
Ukuba ungumthandi weopera, uyakonwabela ukuqaphela ukuba ukusebenza kucwangcisiwe unyaka wonke kwaye italente yeyona inotshi iphezulu. Ngembali etyebileyo, isixeko sikwabonelela ngobuninzi beekhenketho zokuhamba kunye neemyuziyam ukutyelela. Ezinye izinto ezinomtsalane, ezinje ngamangcwaba adumileyo eParis abambe intsalela yabantu abangaphezulu kwezigidi ezithandathu, aya kukushiya nezinto ezininzi ozikhethileyo nokuba ucinga ukuhlala ixesha elingakanani.
Shumi elinanye.I-Dubai, i-United Arab Emirates
Ukuwola unxweme olusempuma mpuma lwePersian Gulf sisixeko esimnandi kangangokuba kufuneka sibonakale sikholelwa ngokwenene. IDubai sisixeko sanamhlanje esigcwele izibane ezibengezelayo, uyilo lovavanyo kunye neminyhadala yemidlalo. Ukuthathwa njengeyona dolophu iphilayo eMbindi Mpuma ngemithombo eliqela, akufuneki woyike inkolo okanye inkcubeko umahluko ophazamisa uhambo lwakho ngokungathandeki.
Isixeko sisixeko sokhenketho, ngenxa yoko unokuziva uzithembile xa uhamba ezitalatweni okanye usitya kwenye yeendawo zokutyela ezibekekileyo. Ukuba unomdla wokujonga ngakumbi uyilo olukhetheke kakhulu, zininzi iiholide onokuthi ujoyine umrhumo omncinci.
Kufuneka iqatshelwe into yokuba iziyobisi azinyamezelwa apha kwaye abantu babanjiwe ngenxa yokufumana izixa ezilinganiselweyo zezihlangu okanye baxutywe nelaphu lepokotho. Ngethuba nje uqaphele ukulandela imigaqo yelizwe, i-Dubai yindawo enomdla kwaye yanamhlanje eyahluke kakhulu kunakuyo yonke indawo kolu luhlu.
Ukusebenza njengendawo yokubeka uninzi lwenoveli kaJohn Irving Ihlabathi ngokukaGarp kwaye idume ngesausage yayo, iVienna sisixeko esidumileyo esinembali etyebileyo. Yayiyikhaya lesazi ngengqondo esidumileyo uSigmund Freud kwaye ke yaziwa njengesiXeko samaphupha, kunye nokuba sisiXeko soMculo ngenxa yokuba sisiseko sekhaya kubaqambi abaninzi abaziwayo abanjengoSchubert noStrauss.
Ukuba uyawuthanda umculo olungileyo, le yindawo yeholide. IiSymphonies, iiokhestra kunye neeopera zihlala zisenza imidlalo yeqhekeza elitsha kunye nelidala.
iliso loyilo lwehorus tattoo
Kubafana abakhetha ukunyuka ehlathini kunokuba basebenzise ikhonkrithi, iVancouver yindawo entle yokufikela. Indawo yasezidolophini ejikelezwe ngabo bonke ubuhle bendalo, le dolophu yenye yezona ndawo zidumileyo kwezokhenketho eMntla Melika ngenxa yeentlobo ngeentlobo zemisebenzi yangaphandle ekhuthazwa yindawo yendalo engqongileyo.
Ukuhamba, ukunyuka intaba, ukukhwela ibhayisikile, ukunyuka amatye kunye nokuqengqeleka kwelog konke kuyathandwa, njengokufota kunye neenkampu.
14.IKapa, ​​Mzantsi Afrika
IKapa sisixeko sesibini ngobukhulu eMzantsi Afrika kwaye imi kanye elunxwemeni. Ikhaya leendwendwe ezininzi kunye nabaphambukeli, isixeko esikhulu esixineneyo likhaya kubantu abohlukeneyo abavela kwiinkcubeko ezahlukeneyo. NjengeNew York kunye Las Vegas , kukho amacandelo apheleleyo esixeko alawulwa luhlanga oluthile okanye olunye, ekunika ukhetho lokuthenga kunye nokutya amava onokukhetha kuwo.
Isixeko sihleli peninsula, oko kuthetha ukuba kuhlala kunendawo eninzi yengubo yakho yaselwandle phakathi kwentlabathi yegolide. Ukuba uthanda ukudada, ukuntywila emanzini okanye ukutshiswa lilanga, ngokuqinisekileyo iKapa kufuneka ukuba likuluhlu lwakho olufutshane lweendawo onokuzindwendwela.
Shumi elinantlanu.Honolulu, eHawaii
Awudingi ukuba nexhala malunga nokufumana incwadana yokundwendwela okanye ukutshintshiselana ngayo nayiphi na imali ukuze ubone iHonolulu, ukanti inkcubeko kunye nembonakalo entle iya kukwenza uzive ngathi ungene kwilizwe langaphandle. Jonga kabini eyakho Uluhlu lokuhlola lokuhamba ngaphambi kokuphuma, bamba imithwalo yakho, kwaye usete. Ezinye zeembalasane ze-Honolulu xa ufika ziilwandle kunye nenkcubeko yemveli, ebandakanya amaqela aziwa njenge-luaus ekunika ithuba lokungcamla ezinye zokupheka kwesiqithi.
Ukujonga ixesha eligqithileyo lokudlula, njengokuhamba ngendlela kwihlathi elishinyeneyo. Kukho ukhenketho lokubona indawo kunye nohambo lokunyuka olusuka eHonolulu yonke imihla, ke musa ukoyika ukuphuma kwaye wolule imilenze kwiholide yakho.
iphupha lokubamba iphupha egxalabeni
iapile yeta tattoo yam
imibono epholileyo yehalloween yabafana
Ukuhonjiswa okuluhlaza okwesibhakabhaka nokumdaka